Maleeshiyaadka Macawiisleyda Oo Weerar Ku Qaaday Saldhig Boolis - Caasimada...
Maleeshiyaadka macawiisleyda oo weerar ku qaaday saldhig Boolis – Caasimada…
Buula Burde (Wararka Maanta) – Wararka naga soo gaarayo Magaalada Buula Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubeysan ay weerar culus kusoo qaadeyn saldhigga Magaalada.
Saldhigga ayaa wuxuu dagaal ku dhex maray maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyo ciidamada Booliska ee ku sugnaa Saldhigga, waxaana ka dhashay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn maadaama waqtiga uu weerarka dhacay aheyd xilli habeen ah.
Wararka Maanta : Daawo: Dibad-bax ka dhan ah Farmaajo oo ka billowday qeybo ka mid ah Muqdisho -...
Maleeshiyada weerarka soo qaaday oo la sheegay inay ahaayeen kuwa macawiisleyda ayaa la sheegay inay isku dayeen in xabsiga kasoo furtaan mid kamid ah ciidamadooda oo halkaas lagu xiray.
Ciidamada Booliska ee saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegay inay iska caabiyeen maleeshiyadii soo weerartay, waxaana fashilmay qorshihii lagu soo furan rabay askariga ku xiran saldhigga ee ka tirsan Maleeshiyada Macawiisleyda.
Magaalada Buula Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa khilaafka u dhaxeeyo macamiilseyda iyo Booliska, waxaana laga cabsi qabaa in magaalada ay martgeliso dagaal dhex maro labada dhinac.
Wararka Maanta : Warbixin shaacisay ‘xaddiga laalushka’ ee MUQDISHO
Waxaa jiro warar kale oo sheegaya in maleeshiyada weerarka soo qaaday ay la socdeyn ciidamo ka amar qaata Guddoomiyaha Degmada Buula Burde, inkastoo aan weli xaqiiq dhab ah loo helin.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaan weli ka hadlin weerarkii culsaa ee xalay lagu soo qaaday saldhigga degmada Buula Burde.
Ciidamada Macawiisleyda ayaa aad ugu xooggan qeybo kamid ah deegaanada Maamulka Hirshabelle, waxayna dhowr jeer dagaal la galeyn Al-Shabaab iyo ciidamada Dowladda, waxaana ugu dambeysay dagaalkii ay ku qaadeyn ciidamada Booliska Haramcad ee ku sugan Magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaas.
Wararka Maanta : Daawo: Rooble oo ku dhowaaqay xabad joojin iyo shir deg deg ah - Wararka Maanta
Related Topics:BoolisCaasimadaFeaturedmacawiisleydaMaleeshiyaadkaQaadaysaldhigWararka Maantaweerar
Ninkii wejiga ka dharbaaxay Macron oo ka hadlay sababta uu falkaas u…
Kheyre oo wajahaya cadaadis xooggan iyo eedeymo saameyn kara rajadiisa…
Deg Deg: Xogta RW Rooble oo isaga baxay Shirkii Wasiirada, Xaaf oo weeraray…
Magaaladee ayey ka dhici doontaa doorashada ugu adag ee baarlamanka 20…
Mucjisooyinka dib u dhiska Ciidanka & Kal-adayga Soomaalida | Tiigsiga…
Kingsley Coman Ayaa Doonaya Inuu U Dhaqaaqo Premier League Dalka…
Somaliland oo sheegtay in ay waraaqo u kala dirtay caalamka
Deg Deg: RW Rooble oo weeraray Qoor-Qoor, Guusha Md Farmaajo & Militeriga…
Dhuusamareeb (Wararka Maanta) – Inkasta oo si guud ay sanadkaan u adag tahay doorashada xildhibaanada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa haddana waxaa jira saddex magaalo oo ah kuwa uga adag ama cabsida weyn laga qabo ee doorashooyinka ay ka dhici doonaan.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa la aaminsan yahay in ay tahay meesha ay ka dhici doonto doorashada ugu adag, waxaana laga cabsi qabaa in uu dhiig ku daato.
Waxaa ku loolami doono siyaasiin qaarkood hadda ku jira baarlamaanka oo kala jira dhinacyada mucaaradka iyo muxaafadka, waxaana u dhaxeeya Qoor Qoor oo labaduba mid la safan karin daruufo badan oo ku geedaaman aawgood.
Magaalada ayaa durbo noqotay magaalo ciidan, waxaana ku qulqulayo ciidamo ka socda mucaaradka halka sidoo kale ay hore u joogeen ciidan ka amar qaata Villa Somalia.
Wararka Maanta : Feysal Cali Waraabe oo shaaciyey dhibaato ay kala kulmeyn wada-hadalada DF...
Qoor Qoor ayaa loogu hanjabay in kursigiisa uu ku waayi doono haddii uu boob ku soo saaro musharaxiinta taabacsan Villa Somalia, waxaana ugu hanjabay Xildhibaanada Habargidir iyo Musharaxiinta Madaxweyne ee ka jeeda Galmudug.
Sidoo kale Villa Somalia ayaa Qoor Qoor ku cadaadineysa in aysan soo laaban Xildhibaanada mucaaradka ah ee ka soo jeeda Galmudug sida Mahad Salaad, Cabdiraxmaan Odowaa iyo qaar kale.
Dad badan ayaa aamisan in Dhuusamareeb ay noqon doonto meesha ay ka dhacayso doorashada mida ugu xiisaha badan uguna qatarta badan.
Magaalooyinka Garbahaareey iyo Beladweyne ayaa sidoo kale ah kuwa xiga. Dad badan ayaa qaba in labadaan magaalo haddii aan si fiican loo maareynin ay ka dhici karaan isku dhacyo ka dhasha doorashada inkastoo madaxda HirShabeelle iyo Jubaland ay wadaan olale doorashada loogu soo koobayo min hal magaalo.
Doorashada Soomaaliya ayaa la filayaa in loo dhaqaaqo maalmaha soo socda, waxaana loo arkaa in doorashadaan ay tahay mid adag oo sababi karta dagaalo haddii aan loo maareynin si dagan oo ay ku jirto wada-hadal iyo is faham.
Wararka Maanta : Deg Deg: DF oo Jawaab Culus bixisay, Kenya oo isdhiibtay & Xogta Askartii...
Khamiis, Juun, 17, 2021 (Wararka-Maanta) – Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in Somaliland ay waraaqo u dirtay caalamka si loo iib geeyo doorashooyinkii qabsoomay.
Wasiirka ayaa sheegay in doorashooyinkii Somaliland ka dhacay uu caalamku aad u amaanay sida darteedna caalamka laga iibin doono.
“Warbixin ay dowladaha Yurub oo dhami doorashada kasoo saareen, aad iyo aad ayay u amaaneen” ayuu yidhi wasiirku.
“Dowladaha gobolkan oo qaar kood doorasho ka qabsoomi doonto waxa lagu yidhi “waa in aad qabataaan doorashooyinki Somaliland oo kale”.
Wararka Maanta : Madaxweynaha Puntland oo soo magacaabay Xubnaha Guddiga doorashooyinka
“Dowladu hada waraaqo ayay uwada qortay dhamaan hay’adaha caalamiga ah, sida Qaramada midoobay, Jamacada carabta, Midowga Africa iyo Igad” ayuu hadalkiisa ku daray wasiirku.
Dhamaan goobjoogayaashi kormeerayay doorashooyinkii Somaliland, ayaa aad u amanay nidaamkii ay u dheceen doorashooyinkii deegaanka iyo wakiiladu ee Somaliland.
Golaha deegaanka ee caasimada Hargaysa oo doortay mayor cusub
Khamiis, Juun, 17, 2021 (Wararka-Maanta) – Xubnaha cusub ee golaha deegaanka Hargaysa, ayaa Cabdikariin Axmed Mooge u doortay mayorka cusub ee Hargaysa, halka Khadar Axmed Cumar loo doortay mayor ku xigeen.Mooge ayaa ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa doorashadii golaha deegaanka ee Hargaysa, isla markaana wuxu mudo badan u ollolaynayay jagada mayorka Hargaysa.
Xildhibaano badan oo doonayay in ay kula tartamaan Mooge jagada mayorka, ayaa ka tanaasulay hankoodii isla markaana isaga u tanaasulay.
Xildhibaanada loolanka adag ugu jiray Jagada mayorka waxa ugu caansana mayorkii hore ee Hargaysa Cabdiraxman Maxamud Caydiid Soltelco, oo madaxweynaha Somaliland uu ku qanciyay in uu Mooge u tanaasulo.
Wararka Maanta : Mareykanka oo cunaqabateyn dhaqaale iyo mid amni kusoo rogaya Itoobiya
Dhamaan ba xildhibaanada golaha deegaanka saddexda xisbi uga soo baxay, ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay in Mooge noqdo mayorka caasimada Hargaysa.
Dadwaynaha ku dhaqan caasimada Hargaysa oo codka ugu badan siiyay mayorka cusub, ayaa rajo wayn ka qaba in uu horumarin doona Hargaysa.
“Alle waxan ka baryaya in aanu noqono kuwa kitaabka ay ku dhaarteen ilaaliya, kuwa Hargaysa u shaqeeya iyo kuwo taariikh ka taga” sida waxa yidhi Cabdikariin Axmed Mooge kadib markii la doortay.
Wararka Maanta : Blinken oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray is-mari waaga doorashada Soomaaliya iyo dibad-baxyadii...
Magaalooyinka ilaa hada doortay mayoradooda waxa kamida Berbera, oo mayor Ciddin dib loo doortay, Gabilay oo mayor Maxamed Amiin dib loo doortay iyo Ceerigaabo oo mayor Ismaciil Xaji Nuur dib loo doortay.
Madaxweynaha Galmudug oo soo gudbiyay liiska xubnaha guddiyada doorashada…
Khamiis, Juun, 17, 2021 (Wararka-Maanta) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo gudbiyay liiska xubnaha guddiyada doorashada heer Fedaraal iyo heer dowlad goboleed ee laga sugaayay inuu soo gudbiyo.Xubnaha uu soo gudbiyay madaxweyne Qoorqoor ayaa isugu jira sadex xubnoid oo ah guddiyada heer dowlad goboleed iyo heer Fedaraal iyo xubin ka mid ah xalinta Khilaafaadka.
1- Yaxye Cisman Geedi
2- Mahad Cabdullaahi Maxamud
3-Xaawo Aadan Yare Culusow
4- Ayaan Cabdiraxmaan Maxamud.
Wararka Maanta : Madaxweyne oo qoray maqaal uu ugu magac daray, Ha igu Eedeyn Dib udhaca...
Magacaabista xubnahan ayaa imaaneysa xili shalay uu Xafiiska Raysal wasaaraha Soomaaliya ka dalbaday madaxweynaha Galmudug inuu soo dedejiyo soo gudbinta liiska xubnaha guddiyada doorashada, iyadoo ugu dambeyna maanta uu soo gudbiyay madaxweyne Qoorqoor liiskii laga dalbay soo gudbintiisa.
Cali Dheere oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka Kansarka – Caasimada …
Gaalkacyo (Wararka Maanta) – Afhayeenka guud ee kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay xanuunka Kansarka, sida uu shaaca ka qaaday guddoomiyaha Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) oo sheegay inuu helay xogo amni.
Sanyare oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga ayaa sheegay in xogo lagu kalsoonaan karo oo ay heleen ay ku ogaadeen in xaalad halis ah uu ku sugan yahay Sheekh Cali Dheere oo muddo fog ah afhayeenka dhaq-dhaqaaqa Al-Shabaab.
Wararka Maanta : Shil gaari oo ku dhaawacmay fanaan dhalinyaro ah iyo geerida qof shacab ah ...
Guddoomiyuhu waxa kale oo uu intaasi ku daray in afhayeenku uu si xun u haleelay xanuunka Kansarka, isla-maraakan uu haatan la daala dhacayo xaalad aad u adag.
“Xogo Amni oo lagu kalsoonyahay oo aan helnay waxay tibaaxayaan in Afhayeenkii Argagixisada Al-shabaab Cali Dheere uu ku dhacay Xanuunka Cancer-ka ilaa hadana uu la daala dhacayo oo uu si xun u haleelay,” ayuu qoraalkiisa ku yiri guddoomiyaha Mudug.
Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey “Waxaa bishaaro iyo guula in dhiigii umada islaamka ah uu ilaahay ka soo saaray dushooda Aakhirana ay sugayso Cadaab daran oo looga gudayo waxii dhibaato ay aduunka Ugu gaysteen Umada islaamka ah.
Wararka Maanta : Somaliland oo ka jawaabtay war ay Puntland kasoo saartay imtixaanaadka...
Cali Dheere oo aa in muddo ah laga helin wax muuqaal ah, balse ma jiraan ilo madax banaan oo xaqiijin kara xaaladda dhabta ah ee uu haatan ku sugan yahay.
Si kastaba illaa iyo ma jiro hadal rasmi ah oo kasoo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan xaaladda caafimaad ee afhayeenkooda, maadaama la soo wariyey inuu ka dhacay Kansar.
Cabdikariin Axmed Mooge oo loo doortay duqa Hargeysa – Wararka Maanta…
Hargeysa (Wararka Maanta) – Xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa saaka doortay maayar cusub, kadib doorasho ka dhacday gudaha magaaladaasi.
Golaha wakiilada ayaa waxaa xilka maaryarka Hargeysa oo si weyn la’isugu hayay ugu dambeyn u doortay Cabdikariin Axmed Mooge oo ka tirsan xisbiga mucaaradka Wadani.
Mooge ayaa sidoo kale ahaa musharraxii ugu codadka badnaa doorashooyinkii dhowaan ka dhacay deegaanka Somaliland, wuxuuna helay 26 kun.
“Illaahay waxaan ka baryayaa in uu naga dhigo kuwo Kitaabka ay ku dhaarteen ilaaliya oo dadkooda u shaqeeya,” ayuu yiri duqa cusub oo la hadlay Wariyeyaasha kadib doorashada.
Doorashada ayaa aheyd mid loo dhan yahay, waxaana Cabdikariin Axmed Mooge si aqlabiyad leh ugu doortay duqa Hargeysa xubnaha 17-ka ah ee golaha deegaanka.
Sidoo kale waxaa isna maayar ku xigeen loo doortay Khadar Axmed Nuur oo ku soo baxay doorashadii saaka ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Doorashadan oo gacan taag aheyd waxaa sidoo kale goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland, Maxamed Kaahin Axmed oo boggaadiyey qaabka ay u dhacday.
Waxaa sidoo kale baraha bulshada iyo deegaanada Somaliland ka billowday dabaal-degyo lagu soo dhoweynayo doorashada duqa cusub ee Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge.
Si kastaba, Somaliland ayaa waxaa 31-kii bishii May ka dhacday doorasho taariikhi aheyd oo isugu jirtay taan baarlamaanka iyo mida deegaanka, waxaana ku tartamay xisbiga haatan talada haya ee Kulmiye iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo UCID.
Wararka Videos23 mins ago
Axmed Madoobe oo Si Adag Uga Jawaabay Eedayntii Farmaajo
Fallanqayn: Madaxweyne Farmaajo iyo Shirka Magaalada Muqdisho
Warka Ciyaaraha6 days ago
James Swan iyo Rooble oo ka wada hadlay dib u dhaca fulinta qodobadii lagu…
Hordhac: Kulanka Turkey Vs Italy Guruubka A Ee UEFA Euro 2020, Shaxda Iyo…